यस्तो छ यो साताको शेयर बजारको अवस्था, अब के होला ?
श्रावण १९, २०७६ मध्य नेपाल संवाददाता
गत साता नेप्से परिसूचक १२६९ दशमलब ९२ बिन्दुमा खुलेको थियो । १२७१ दशमलब ०४ को ‘इन्ट्राडे’ उच्च बिन्दु बनाएको थियो । त्यस्तै गरि ‘इन्ट्राडे’ न्यून बिन्दु १२५० दशमलब १८ थियो भने बजार १२६३ दशमलब ८४ बिन्दुमा बन्द भएको थियो ।
यो अघिल्लो साताभन्दा ६ दशमलब ०८ अंक अर्थात ० दशमलव ४८ प्रतिशतको गिरावट हो । यो साता भएको पाँच दिनको कारोबारमा २ अर्ब ८ करोड ६२ लाख बराबर रकमको शेयर कारोबार भएको छ । यो अघिल्लो साताभन्दा ५ दशमलब ४८ प्रतिशतले बृद्धि हो ।
चित्र नं १ ः साप्ताहिक मैनबत्ती प्रवृत्ति
विगत एक बर्षदेखि बजारको उतारचडाब कस्तो रह्यो भनि हेर्नलाई चित्र नं. १ मा नेप्सेको साप्ताहिक मैनबत्तीहरुलाई प्रयोग गरिएको छ । अघिल्लो साताको विश्लेषणको निश्कर्ष अनुसार बजार हाल मुख्य प्रतिरोध क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ भनिएको थियो भने यो साता बजार अझै पनि त्यहि मुख्य प्रतिरोध क्षेत्रमा र सामान्य टेवा क्षेत्र माथि रहेको देखिन्छ ।
चित्र नं.२, गत दुई महिनादेखि बजार कस्तो रह्यो भनि हेर्नलाई दैनिक मैनबत्तीहरुलाई प्रयोग गरिएको छ । पांच कारोबार दिन अघि बजारले १२५०मा टेवा प्राप्त गरि बजार केहि सकारात्मक देखिए पनि हाल बजार प्रतिरोध क्षेत्रमा रहेको छ । अन्तिम दिनको मैनबत्तीले सूटिङ्ग स्टार आकृति बनाएको छ । यसले बजारको प्रवत्तिमा परिवर्तन हुन सक्ने संकेत गरे पनि अर्को दिनको मैनबत्तीलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । अन्तिम दिनको मैनबत्तीलाई परिमाणले समर्थन गरेको देखिन्छ ।
यो साता ६ र २१ दिनको एक्सपोनेन्सियल मुभिङ्ग एभरेज (ईएमए)हरुले दिएको संकेत प्रभावकारी देखिन्दैन । रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स (आरएसआई) ४९ दशमलब ८६ अंकमा रहेको छ । यसको प्रवृत्तिले बजारमा क्रेता र विक्रेताको चाप लगभग बराबर अवस्थामा रहेको संकेत गर्दछ । एमएसिडिको प्रवृत्तिले बजारमा विस्तारै क्रेताको चाप बढी रहेको संकेत गरेको छ ।
निश्कर्ष : हालसम्म नेप्सेको प्रवृत्तिहरु र सूचकहरुले बजारमा गत १ महिनादेखि उतारचडाब कम भएको संकेत गरे पनि समग्रमा हेर्दा यदि बजार १२८५ भन्दा माथि स्थिर रहेमा बजार अझ केहि सकारात्मक हुन सक्ने संकेत गर्दछ । अर्को तत्कालिन मुख्य प्रतिरोध १३००को क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । यो क्षेत्र आफैमा पनि मनोबैज्ञानिक प्रतिरोध क्षेत्र हो । त्यस्तै चित्र नं.२ मा देखिए बमोजिम एक महिनाको तल्लो प्रवृत्ति रेखा सामान्य टेवाको रुपमा रहेको देखिन्छ । यदि बजार यो टेवा क्षेत्रभन्दा तल रहेमा बजार अझ केहि सच्चिन सक्ने प्रारम्भिक संकेत गर्दछ । -सौजन्य काठमान्डौ प्रेस
आइतवार, श्रावण १९, २०७६, १२:०८:००